Tetika 5 hanamafisana ny fitehirizana ao an-dakozia kely | Bezzia
Maria vazquez | 08/06/2021 12:00 | lakozia
Sarotra ny lakozia kely. Ahoana ny fomba hananganana toerana ho an'ny zavatra rehetra ilaintsika amin'ny toerana kely? Ny fanamafisana ny fitehirizana dia lakilen'ny fanaovana ny lakozia ary ny fandrahoana sakafo dia asa iray ankafizinay hatrany. Fa ahoana no hanaovana azy?
Tany Bezzia dia nanangona teti-dratsy maromaro izahay ampitomboina ny fitehirizana ao an-dakozia kely. Ary tsy mila lakozia banga ianao vao afaka mampihatra azy; amin'ny famoronana dia azonao atao koa ny mampihatra azy ireo ao anaty lakozia efa vita fanaka. Makà!
Alohan'ny hanombohanao mampihatra ireo tetika zarainay aminao, tianay ianao mba hazava tsara fa raha manana zavatra betsaka kokoa noho ny toerana fitahirizana ianao dia tsy ho madio mihitsy ny lakoziananao. Ataovy lohalaharana, esory izay tsy ampiasainao tsy tapaka ary ho mora kokoa ny zava-drehetra.
1 Araraoty ny rindrina rehetra
2 Ahenao ny haben'ny fitaovana
3 Miloka amin'ny latabatra azo esorina
4 Manokana tranonkala iray ho an'ny zavatra tsirairay
5 Mametraha varavarana mihetsiketsika
Araraoty ny rindrina rehetra
Manana rindrina maimaim-poana ao an-dakozanao ve ianao? Mametraha vahaolana hatreny amin'ny valindrihana izay mamela anao hanatsara ny habaka fitahirizana. Atambaro ireo vahaolana mitahiry mihidy miaraka amin'ireo misokatra hafa mamela anao hanana eo am-pelatananao izay ampiasainao isan'andro. Ireo vahaolana ireo dia tsy mila lalina; 20 santimetatra dia ampy handaminana siny fitaratra misy legioma, serealy, voa ary zava-manitra, ary koa hitahirizana kojakoja kely, lovia na kaopy.
Azonao atao koa ny manararaotra ny eo an-dakozia mba hanana toerana malalaka handaminana condiment sy kojakoja samihafa. ny vy vy na talantalana tery no hanome anao toerana eo anelanelan'ny takelaka sy ny arimoara ambony ho an'ny zavatra betsaka noho ny eritreretinao.
Ahenao ny haben'ny fitaovana
Ireo fitaovana dia mandray ampahany betsaka amin'ny habaka ao an-dakozianay. Na izany aza, tsy tokony ho toy izao; azontsika atao ny mampifanaraka ny haben'ny fitaovantsika amin'ny haben'ny lakozia. Ny laharam-pahamehana no lakile misafidy izay fitaovana elektrika azontsika atao raha tsy misy na azontsika ahena ny habeny.
Tena ilaina ho anao ny fanasana vilia? Angamba azonao atao ny mampihena ny habeny ho takalon'ny fanaovana azy io matetika. Ary koa, raha tsy mihinana be loatra ianao dia mety tsy mila vilany fandrahoana efatra. Azonao atao koa ny mieritreritra ny hanao tsy misy fatana na microwave ary misafidy lafaoro misy microwave, a fitaovana miaraka amina fiasa roa sosona. Ireo sy ireo fanovana hafa toy ny fampihenana ny haben'ny vata fampangatsiahana dia hahafahanao mankafy toerana bebe kokoa hitahirizana zavatra.
Miloka amin'ny latabatra azo esorina
Ahoana no anampian'ny latabatra misintona antsika hanamafisana ny fitehirizana ao an-dakozia? Matetika isika rehefa manome ny lakozia dia ataontsika amin'ny alàlan'ny fitehirizana ny iray amin'ireo rindrina hametrahana ny latabatra. Latabatra iray izay ao an-dakozia kely matetika no mivalona. Na izany aza, tsy mila izany intsony isika anio avelao ny rindrin'ny kabinetra mametraka latabatra.
Ny latabatra misintona dia safidy iray amin'ny latabatra aforitra ao an-dakozia kely kokoa. Ampidirina anaty lalimoara ao an-dakozia izy ireo toy ny sombin'ny Tetris. Amin'izany fomba izany dia kely dia kely ny habaka fitahirizana izay mila aparitaka.
Manokana tranonkala iray ho an'ny zavatra tsirairay
Fomba iray hafa hanamafisana ny toerana fitehirizana ny fizarana toerana ho an'ny entana tsirairay. Io fomba io ihany no ahafahanao manatsara ny tsirairay amin'ireo kabinetra na vatasarihana hividianana entana betsaka araka izay tratra. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fampiasana vahaolana azo esorina, mpampisaraka ...
Refesaho tsara ny efi-tranonao tsirairay, izay tianao hotehirizina ao anatiny ary mitadiava vahaolana sahaza hanatsarana azy. Ankehitriny dia misy maro magazay natokana ho an'ny fandaminana trano ao no ahitanao izay ilainao rehetra. Be loatra ka tsy maintsy hialana amin'ny adala ianao mba tsy handaniana vola be loatra.
Mametraha varavarana mihetsiketsika
Mamaha olana maro ny varavarana misosa amin'ny toerana kely. Tsy vitan'ny hoe manamora ny fivezivezena amin'ireo izy ireo, fa mamela anao mametraka kabinetra izay tsy azo atao izany amin'ny varavarana mahazatra. Jereo ireo pantry amin'ny sary etsy ambony! Mila 25 santimetatra ny halalinao mba hamoronana fitoviana amin'ny rafitra modular tsotra sy tsy lafo ary varavarana misosa.
Tianao ve ireo karazana hevitra hanatsarana ny fiasan'ny lakozia ireo? Azo ampiharina ho anao ve izy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » lakozia » Tetika 5 hanamafisana ny fitehirizana ao an-dakozia kely